Ukwehlukahluka kwezimangaliso imikhiqizo esikuyo ukubhekana nsuku zonke, lisinikeza isidingo zokuhlukanisa kubo. Lokhu kwenza kube lula esikhathini sokuphela, futhi inqubo kokuzuza futhi ukuhlola ochwepheshe emakethe sokuthuthukisa okukhuthaza imikhiqizo.
Lezi zinhlobo ezilandelayo izimpahla abelwe ngokuvumelana nesimiso of tangibility:
Ezingokoqobo noma benezincwadi ngomzimba wenyama:
izinto eziqinile - izinkuni, steel, amalahle;
izinto gaseous - helium, i-hydrogen, carbon dioxide;
imikhiqizo uketshezi - uphethiloli, uwoyela, igesi.
Yomuntu ehlukile noma angaphatheki:
imali engukheshi kanye non-cash, izibambiso, lwemali;
Ukufingqa - umkhiqizo othize okuletha inzuzo kumnikazi wazo enikeziwe okungukuthi enembile, esesikhathini futhi kuphelele;
amasevisi izakhiwo ezahlukene - nendawo ukuba lapho umthengi ozuza iyasiza lesevisi wayo - bazuze somphako wabo.
Ukwahlukanisa izimpahla ekukhangiseni lwenzeka ezinye izizathu. Kukhona ingxenye umkhiqizo marketing ukuxubana, ngivuka belingana intengo nezindlela ukukhuthazwa nokusatshalaliswa imikhiqizo. Ukuze ukuthenga izimpahla, umdayisi bebhekene nesidingo sokutadisha emakethe futhi zabathengi isidingo.
Kuye uhlobo emakethe, lapho kukhona ukudayiswa, ungakwazi ukuhlonza lezi zinhlobo ezilandelayo izimpahla.
Ezidayiswayo. Okungukuthi, labo imikhiqizo kanye namasevisi zinhlelo zibhekiswe umthengi ekupheleni. Basuke ngokuvamile isetshenziselwe izinjongo siqu noma eyasekhaya ekuphileni kwansuku zonke. Lokhu ukudla, izicathulo kanye zokugqoka, ifenisha, izimpahla zasendlini kanye nezimoto.
izimpahla Industrial. Wayehlose kucutshungulwe.
Isici esiyinhloko ukuthi ihluke nomunye, lezi zinhlobo imikhiqizo injongo zona kuluthola. Ngokwesibonelo, uma ikhasimende wathenga lawnmower futhi uhlela ukubhekana engadini, bese isihloko waba lezimpahla ezimbonini. Kodwa kuwufanele ukuqala ukuyisebenzisa sika utshani akho njengoba ithuluzi efanayo engena isigaba ezidayiswayo.
Lezi zinhlobo imikhiqizo babe zenyathi yabo. Industrial imikhiqizo zihlukaniswe izinto zokusetshenziswa, izingxenye kanye izinto, izinto asizayo, imisebenzi, imali nempahla.
Izinto zokusetshenziswa - imikhiqizo yezolimo (okusanhlamvu, inyama, imifino, izithelo, njll ...) Futhi imikhiqizo yemvelo (ukhuni, itshe-nsimbi, uwoyela).
Izingxenye kanye materials. Izinto (yensimbi, usimende, ntambo) bavame eminye kusetshenzwe, futhi izingxenye (amathayi, izinjini kanye nokunye okufana nalokho. D.) Ingabe ingxenye wokugcina zinjalo.
Izidingo zeSilo kanye izinto - noma izinto zokusebenza (amafutha, namalahle ephepheni), noma izinto ezisetshenziselwa ukukhanda noma ukunakekelwa.
Capital izimpahla - senzelwe ukusetshenziswa umthengi yemisebenzi yayo ukukhiqizwa. Yonke le izakhiwo, kanye namahhovisi ngabanye, kanye nemishini ezimbonini.
Ezidayiswayo ekhungethe ukuziphatha abathengi ngesikhathi yezitolo kanye nesimo izimfuno subtypes eziningana ezinkulu.
ukuthenga ngamawala. Ethengwayo angesabi bedle izici engahlelelwe (izincwadi, uswidi ushingamu nokunye. D.). Ngokuvamile wathenga ezindaweni ezingalindelekile lezo zimpahla.
ukuthenga eziphuthumayo. Imikhiqizo uthenge ngumuntu isidingo okungazelelwe wasuka, ezifana nemithi, izingxenye ezisele, izambulela, njll
imikhiqizo Substitutable. Okungukuthi imikhiqizo efanayo ezihlangabezana nezidingo okufanayo. Lawa itiye nekhofi, imajarini bhotela.
imikhiqizo ahambisanayo - CD-player kanye amadiski kuso, amakhamera digital khadi.
Ukuze kube lula kokubili abathengi kanye nabaphakeli futhi abakhiqizi, ke udedelwe somhleli olulodwa kwezimpahla, lapho ngamunye wabo uye ikhodi yayo ngesilwane esifuywayo okwabelwe.
Isigaba kwezimpahla namasevisi: incazelo, ngezigaba kanye nezinhlobo
Radio nge internet
Top Mystery Amafilimu: izolo, namuhla nakusasa
Emshadweni Muslim - the amasiko
Nizhny Novgorod, lesikhumbuzo Maksimu Gorkomu: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Indlela ukuqeda ulungu kusiphequluli: izeluleko kongoti
B738 - indiza "Boeing 737-800": umlando ukuthuthukiswa, isikimu ingaphakathi, ukubuyekezwa
Ukupheka utshwala ekhaya